ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဟာသလေးတွေပါ ။
HAPMALAYSIA CYBER FORUM :: HAPMALAYSIA CYBER FORUM :: GENERAL (CHIT CHAT) :: ဖိုရမ်ထဲရှိသီးသန့်အကြောင်းအရာမရှိသည့်ခေါင်းစဉ်များကိုဒီနေရာလေးမှာ တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ကြပါတယ် Share |
Subject: ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဟာသလေးတွေပါ ။ Mon Apr 19, 2010 6:46 am
ဆရာမ – ခြံစည်းရိုးပေါ်မှာ ငှက် ၅ ကောင် နားနေတယ်။ တကယ်လို. တယောက် က သေနတ်နဲ. တချက် ပစ်လိုက်ရင်
ငှက်ဘယ်နှကောင် ကျန်မလဲ။ ကဲ ဂျော်နီ ဖြေစမ်း။
ဂျော်နီ – ဘယ်နှကောင်မှ မကျန်ပါဘူး။ သေနတ်ဖောက်လိုက်တာနဲ. အားလုံး ထပျံကုန်မှာပါ။
ဆရာမ – အဖြေ မှန် က ၄ ကောင်ပါ။ မင်းအဖြေက မှားပေမယ်. မင်း၇ဲ. အတွေး အခေါ်ကို ကြိုက်တယ်။
ဂျော်နီ – ဒါဆို ဆရာမ ကို ကျွန်တော် မေးခွန်းတခုမေးမယ်နော်။
ဆရာမ – အင်း မေး။
ဂျော်နီ – အမျိုးသမီး ၃ ယောက် ခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာ ရေခဲမုန်.ထိုင်စားနေကျတယ်။ ပထမတစ်ယောက် က ရေခဲမုန်. ကို
ဘေးကနေ လျှာ နဲ. လျှက်နေတယ်။ ဒုတိယ တစ်ယောက် ရေခဲမုန်.ကို အပေါ်က နေ အားရပါးရ စုပ် နေတယ်။
တတိယ တစ်ယောက် က ရေခဲမုန်.ကို ကိုက်စားနေတယ်။ ဘယ်တယောက်က အိမ်ထောင်သည် လို.ထင်လဲ ဆရာမ။
ဆရာမ – အပေါ်က နေ စုပ် နေတဲ. သူက အိမ်ထောင်သည် ပေါ.ကွယ်။
ဂျော်နီ – မှားပါတယ်ဆရာမ ၊ သူတို.ထဲ က လက်ထပ် လက်စွပ်ရှိတဲ.သူ က အိမ်ထောင်သည် ပါ။
ဒါပေမယ်. ကျွန်တော် ဆရာမ အတွေးအခေါ်ကို သဘောကျတယ်။
*** ဇော်သိင်္ခ ရေးသားသည် ။
ဆေးကျောင်းတခုတွင် ဖြစ်သည်..။ ဆရာပေါက်စ ၂ ယောက် က ကျောင်း သား ကျောင်း သူ များ
စာမေးပွဲ စစ်နေသည်..။ ဆရာပေါက်စ ၂ ယောက် က ခွက် ပုံး ကစ် ရင်း စစ် နေ ကြခြင်းဖြစ် သည်…။
စစ် တဲ့ ပုံ စံ က တော့… ကြွတ်ကြွတ် အိပ်လေး တခု စီထဲ မှာ. လူ့ ကိုယ်တွင်း မှာ ရှိတဲ့..
အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်း တ ခု စီထည့် ထား သည်…။ ပြီးတော့.ကျောင်း သား၊ ကျောင်း သူများက
မိ မိ စိတ် ကြိုက် အိပ်ကို ရွေး ချယ် ပြီး ထို အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း သည် ဘာ ဖြစ် တယ်.. ဘယ် လို အလုပ် လုပ် တယ်
ဆို တာ ကို ဖြေ ဆို ရမှာ ဖြစ် ပါတယ်..။
အဲ ဒီလိုနဲ့..ကျောင်း သား ကျောင်း သူ တွေ ဖြေဆို သွား လိုက် ကြတာ..ကျေားင်းသူလေး တ ယောက် အလှည့် ကြတော့….
ကျွတ်ကျွတ် အိပ်ကို စမ်း ကြည့်ပြီး…မျက်လုံး ပြူး မျက်စံ ပြူး နဲ့..
“ဟင် .. ဟင်.. ဒါ….ဒါ … ဒါ .. ၀က် အူချောင်း…၀က် အူ ချောင်း” ..
အဲဒီမှာ ဆရာ ၂ ယောက် က…
“သမီး ဒါ စာမေး ပွဲစစ် တာ လေ…သေချာစဉ်းစား သမီး ..။
သမီး မှာ chance ရှိ တယ် စဉ်းစား လို့ ရသေးတယ် “
“မ.. မဟုတ်ဘူး.. ဒါ ၀က်အူချောင်း မှ ၀က် အူချောင်း အစစ်..”
“မဟုတ်သေးဘူးလေ သမီး… ဒါလူ့ ကိုယ် အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်း တွေ.. လေ ။
ဘယ်လို လုပ် ၀က် အူချောင်း ပါမှာလည်း… သေသေ ချာချာစဉ်းစား သမီး
ပြီးတော့ သမီးက ဆရာဝန်လုပ်မှာလေ.. မရှက် ရဘူး…။ ရဲရဲ သာဖြေပါ ။ ”
“မဟုတ်ဘူး သမီး သိ တယ် ဒါ ၀က် အူချောင်း မှ ၀က် အူချောင်း အစစ်..”
ထိုအခါ ဆရာ ၂ ယောက် မှာ မနေသာတော့ပဲ.
“ ကဲ ဒါဆို ဖွင့် ကြည့် ကြရအောင် ” ဆို ပြီး ဖွင့် ကြည့်လိုက် တဲ့ အခါ…တ ကယ် ပဲ.. ၀က် အူ ချောင်း ကြီး ထွက်လာ သတဲ့…..
ထို အခါ ဆရာ တစ် ယောက် ပြောလိုက် ပုံ က..
“ ဟာ .. ခွီး တဲ့ မှ ပဲ… ငါ တို့.. ၀က် အူ ချောင်း နဲ့ မှား မြည်းမိပြီ ဟ"
စပိန်နိုင်ငံတွင် နွားရိုင်းသတ်ပွဲ ကျင်းပလေ့ရှိသည် ။ မာယော့ကာ မြို.ပြင်ရှိ နွားရိုင်းသတ်ကွင်း
အပြင်ဘက်တွင် နာမည်ကြီး စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင် ရှိသည် ။ ထို စားသောက်ဆိုင်တွင် အထူးသဖြင့် ခရီးသွားဧည့်သည်
များ အထူးကြိုက်နှစ်သက်သော အစားအစာမှာ နွားရိုင်းသတ်ပွဲ အပြီးတွင် ရှုံးနိမ့်ပြီး အသတ်ခံရသော နွားဧ။် ဖိုက်တင်းဘော
အလွန်ကြီးမားသန်မာသော နွားသိုးကြီးများ ဖြစ်သဖြင့် ဖိုက်တင်းဘောဟင်း တစ်ပွဲကို ယူရိုငွေ တစ်ရာ
ပေးရသော်လည်း စားချင်လျင် ဘွတ်ကင် ကြိုလုပ်ထားရလေ့ရှိသည် ။
တစ်နေ. ဧည့်သည်တစ်ယောက် ဖိုက်တင်းဘောဟင်း မှာစားသည် ။ စားပြီးနောက် ဘီလ် ရှင်းရန်
ဘွိုင်ကို ခေါ်လိုက်သည် ။ ခနကြာတော့ ဘွိုင်က ဘီလ် စာရွက်ယူလာပေးသည် ။
" ဟေ့ ဘွိုင်... ဖိုက်တင်းဘော တစ်ပွဲ ကို ယူရိုတစ်ရာ လို. ရေးထားတယ် မဟုတ်လားကွ။
ဘီလ်ထဲ မှာ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး နှစ်ရာ ဖြစ်နေရတာလဲ ။ ပြီးတော့ မင်းတို. ဖိုက်တင်းဘောကလဲ
ခုန နွားသိုးကြီးဟာမှ ဟုတ်ရဲ့လား ။ ပိစိကွေးလေးကွာ ။ မှန်မှန် ကန်ကန် လုပ်စမ်းပါ ။"
"သြော..ဒါလား။ ဒီလိုရှိပါတယ် ခင်ဗျာ ။ တခါတလေ နွားရိုင်း နိုင်တဲ့အခါလဲရှိပါတယ် လူကြီးမင်း ခင်ဗျာ ။"
ပိုးကောင် သားအဖ နှစ်ယောက် နောက်ချေးပုံထဲ ထိုင်နေကြသည် ။
သားက အဖေ ကို မေးသည် ။
" အဖေ ၊ ပန်းသီး ထဲမှာနေရတာ ကောင်းလား ဟင် "
" ကောင်းတာပေါ့ သားရယ် " သက်ပြင်းချပြီး အဖေက ဖြေသည်။
" လိမ္မော်သီးထဲမှာနေရင် ကော ဟင်"
" လိမ္မော်သီးထဲမှာ ဆို ပိုကောင်းတာပေါ့ သားရယ် " အဖေပိုးကောင်က စောစောကထက်
သက်ပြင်းချပြီး ဖြေသည် ။
" အဲဒါဆို ဘာဖြစ်လို.ကျနော်တို. ဒီနောက်ချေးပုံထဲနေ နေရတာလဲ ခင်ဗျ "
" အင်း ၊ မင်း ကို ဘယ်လိုများ ရှင်းပြရပါ့ ၊ အို မင်းကြီးလာရင် နားလည်လာမှာပါ သားရယ် ။
လူတိုင်းမှာ သူ.ရဲ့ ကံကြမ္မာ ဆိုတာရှိတယ် ။ ပြီးတော့လည်း အမြတ်တနိုးထားအပ်တဲ့
' အမိနိုင်ငံတော် ' ဆိုတဲ့ စကားကလည်းရှိသေးတယ်ကွဲ. ငါ့သားရဲ့ "
ဒေါက်တာ ဂျက် လာပါပြီ ...
လူနာက ဆရာဝန် ကို ပြောသည် ။
" ဒေါက်တာ ၊ ကျနော့် ခါး အင်မတန် ကိုက်နေတယ် ခင်ဗျ"
" အင်း ၊ ခင်ဗျာ ခြေထောက် နှစ်ဖက်ကို ဖြတ်ပစ်ရလိမ့်မယ် ဗျာ "
လူနာသည် ကြောက်ကြောက် လန်.လန်.နဲ့ အထွေထွေ ရောဂါကု ဆရာဝန် ဒေါက်တာ ဂျက်ဆီ ပြေးသည် ။
" ဒေါက်တာ ၊ ကျနော့် ကို ကယ်ပါဦး ၊ ကျနော့် ခါး နာနေတယ် ၊ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဆီ သွားပြတာ
သူက ခြေထောက်နှစ်ဘက်လုံး ဖြတ်ပစ်ရမယ်တဲ့ "
" ခွဲစိတ်ဆရာဝန် တွေဟာ ဒီအတိုင်းပဲ ၊ထစ်ခနဲဆို ခွဲဖို.လောက် စိတ်ကူးနေကြတာ ကလား ။
ရော့ ၊ ဟောဒီဆေးပြားတွေကို သောက်ပါ ။ ခြေထောက်တွေ သူ. အဟာ သူ ပြတ်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ် "
ကိုဘမောင် ရုံးအဖွဲ.သားများရှေ.တွင် မိမိဧ။် ဇနီးအကြောင်း ကြွားဝါနေသည်။
" ကျနော့် မိန်းမဟာ တကယ့်ကို တော်တဲ့ မိန်းမပဲဗျ ၊ ကြည့်လေ ၊ ကျနော် ရုံးက ပြန်လာတယ်ဆိုရင်ပဲ
အခန်းဝမှာ ဖိနပ်နဲ့ အိမ်နေ၀တ် လုံချည်အကျီင်္ ကို ချပေးထားတယ် ။ ပက်လက်ကုလားထိုင်ဘေးက
စားပွဲပေါ်မှာ သတင်းစာကို တင်ပေးထားတယ် ၊ ညစာလည်း အဆင်သင့် ပြင်ပေးထားပြီါ်သား ၊
အဲ ပြီးတော့ မီးဖိုပေါ်မှာ ရေနွေးအိုး ကို တယ်ပြီးသား ဖြစ်နေတယ် "
" ရေနွေးအိုး က ဘာအတွက်လဲ ဗျ "
" သြော် ၊ ပန်းကန်ခွက်ယောက်တွေကို ရေအေးနဲ့ ကျနော် မဆေးတတ်ဘူးဆိုတာ သူသိတယ်လေ "
မိန်းမ ထမင်းစားခန်းထဲဝင်လာသောအခါ ယောကျာင်္းက ယင်ကောင်များအား ယပ်တောင်ဖြင့် လိုက်ရိုက်နေသည်ကိုတွေ့ ရသည်။
"ရှင်ဘာလုပ်နေတာလဲ" ဟု မိန်းမကမေးသောအခါ
"တော်တော်များများ သတ်လိုက်ပြီလား" ဟုမိန်းမက ဆက်မေးသည်။
"အေး၊ အမ၂ကောင်၊ အထီး၃ကောင် ဆော်ထည့်လိုက်ပြီ" ဟုယောကျာင်္းကပြောရာ
"ရှင်က ယင်ကောင်ကိုအထီး အမ ဘယ်လိုသိသလဲ "ဟုမိန်းမက ပြန်မေးလေ၏ ။
ထိုအခါ ယောကျာင်္းက "သိတာပေါ့ဟ၊ ဘီယာဗူးပေါ်က ၃ကောင်ကအထီး၊ ဖုန်းပေါ်မှာ ကြာကြာနားနေတဲ့ ၂ကောင်က အမပေါ့" ဟုအဖြေပေးလေသည်။
တစ်ခါကရွာတစ်ရွာမှာ ဆရာနှင့်တပည့်၂ဦး၊ အိမ်တစ်အိမ်မှာအတူနေထိုင်ကြပြီး၊
တစ်နေ့ မှာဆရာကကိစ္စရှိလို့ -" တပည့်ရေ၊ ဆရာအပြင်သွားအုံးမယ် ထမင်းချက်ထားကွာ" လို့ မှာခဲ့ပါတယ်။
ဆရာအပြင်ကပြန်လာပြီး" တပည့်ရေ၊ ထမင်းစားကြရအောင်ခူးကွာ" လို့ ပြောလိုက်တော့၊ တပည့်ကလည်းခူးပြီးတာနဲ့ ဆရာက " ဟင်းကောကွာ" လို့မေးတယ်။
ထိုအခါတပည့်က" ဆရာကထမင်းပဲချက်ထားလို့ မှာတာကို" ဟုပြန်ဖြေတယ်။
ဆရာက အားမလိုအားမရနဲ့ " တပည့်ရာရိုးပါ့၊ ဆရာက 'တစ်' ဆိုရင်၊ တပည့်က 'နှစ်' 'သုံး' အထိစီစဉ်ထားရတယ်ကွ၊မှတ်ထားသိလား လို့ပြောပါတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ မှာတော့ ဆရာဖျားနေလို့ တပည့်ကို" ဆေးဆရာသွားပင့်ခဲ့ကွာ" ပြောတော့၊ တပည့်လည်းအပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ အိမ်ကထွက်သွားတယ်။
ခဏကြာတပည့်ပြန်လာပြီး ဆရာက-"တပည့်ရေ၊ ဆေးဆရာပင့်ခဲ့ပြီလား" လို့ မေးတော့၊
တပည့်ဖြေလိုက်ပုံမှာ-" ဆရာကျွန်တော့်ကိုသွန်သင်တဲ့အတိုင်း၊ ဆေးဆရာလည်းပင့်ပြီ၊
တစ်နေ့အဖျားအလွန်ကြီးနေသောလူနာတစ်ဦးအား၊ ဆရာဝန်ကဆေးကုသပေးပါသည်။
လူနာ- ဆရာ၊ ကျွန်တော်ဘာတွေစားရမယ်ဆိုတာညွှန်ကြားပေးပါ။
ဆရာဝန်- အဖျားကတက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေတော့ အူရောင် ငန်းဖျားဖြစ်မှာစိုးရတယ်။
ထမင်းကအစ အဖတ်ဆိုရင်ဘာမှမစားပါနဲ့ ၊ နွားနို့ ၊ ကော်ဖီ အရည်ဆိုရင်အားလုံး
ပြောပြီးဆရာဝန်ကပြန်သွားတော့သည်။ နောက်တစ်နေ့ လူနာဆီရောက်တော့၊ လူနာအဖျား
ဆရာဝန်- အဖျားတက်နေပြန်ပြီလား၊ ဘာတွေစားလဲ၊ အဖတ်တွေစားတယ်ထင်တယ်။
လူနာ- ဘာမှမစားပါဘူးဆရာရယ် ။ ထန်းရည်ခါး ၁ဗူးပဲသောက်ထားတာပါ။
ဆရာဝန်- ဟာ၊ ဖျားနေတဲ့သူက ထန်းရည်ခါးသောက်ရသလား။
လူနာ- ဆရာက အရည်ဆိုရင်အားလုံးသောက်လို့ ရတယ်ဆို။
ကောင်လေးက သူ့အမေကို ပြောပါတယ်။
“အမေ။ ကျွန်တော်တော့ စာဆက်မသင်ချင်တော့ဘူး။”
သူ့အမေက အံ့သြတကြီးနဲ့ “ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ။” လို့ မေးပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကောင်လေးက ဒီလို ပြန်ဖြေပါတယ်။
“ဟိုတစ်နေ့က ကျွန်တော် ကြားလိုက်ရတယ် အမေ။ လူတစ်ယောက်ဟာ သိတာတွေ များလွန်းလို့ သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ် ခံလိုက် ရတယ်တဲ့။”
တစ်ခါက ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ဖြေတဲ့ အချိန်ပေါ့အခန်းတစ်ခန်းမှာ
င်မလေးတစ်ယောက်ထိုင်တယ်ခုံတစ်တန်းထဲ
ရှေ့နောက်ကိုယ့်စာကိုယ်ဖြေရင်း အချိန်စေ့ဖို့ ၄၅ မိနစ်လောက်အလို
ကောင်မလေးက အဲဒီမှာ မေးခွန်းနံပါတ် (၅)ကိုမဖြေတတ်လို့
အခက်တွေ့နေတယ်ကောင်မလေးက ဂုဏ်ထူးတွေဘာတွေ မှန်းထားတာဒီတစ်ပုဒ်ပဲ ကျန်တာ
ဖြေဖို့ အစ မေ့နေတယ် နာရီကြည့်တော့ မိနစ်
၄၀လောက်ပဲကျန်တော့တယ် အဲဒါနဲ့ ကြံရာမရတော့
အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့နောက်ကကောင်လေးကို လှည့်ပြီး တိုးတိုးလေးမေးတယ်“
ဟေ့.....နံပါတ်(၅) ပြောပြကြည့်“
“အဲဒီမှာကောင်လေးက နောက်ကနေ တိုးတိုးလေးပြန်ပြောတယ်““
စိတ်အရမ်းဆိုးသွားတယ်””အဒါနဲ့သူ့ရှေ့က ကောင်မလေးကိုမေးတော့ မရဘူးပြောတယ်
မိနစ် ၃၀ လောက်ပဲကျန်တော့တယ် အဲဒါနဲ့ ကောင်မလေးကစိတ်ကိုလျှော့ပြီး
အသံလေးချိုချိုသာသာနဲ့ နောက်ပြန်လှည့်ပြီး““ ဟေ့ ...ပြောပြလေဟာ နင်ကလဲ
””ကောင်လေးကလည်းပြန်ပြောရှာပါတယ်““ မောင်လို့ခေါ်ရင်ပြောမယ် ””ကောင်မလေး
တောက်တစ်ချက် တိုးတိုးလေးခေါက်လိုက်တယ် မပြောချင်နေကွာ
နာရီကိုတစ်ခေါက်ထပ်ကြည့်တော့ ၂၅ မိနစ် ပဲကျန်တော့တယ်
နောက်တွေ့မှာမှ မဟုတ်တာ ခေါ်လိုက်ရင် ငါ စာတစ်ပုဒ်ရမှာ တန်ပါတယ် ဆိုပြီး
““ မောင်.............””လို့ခေါ်လိုက်တယ် ကောင်လေးကပြုံးပြီး တိုးတိုးလေးပြန်ပြောတယ်
““ သိပ်မကြားရဘူး ”” ကောင်မလေး နှုတ်ခမ်းတစ်ချက်ဆူသွားတယ်
““ မောင်.....ပြောပြပါနော် ......မောင်နော် ””
အဲဒီမှာကောင်လေးက အနောက်ကနေ ကပ်ပြီးပြန်ပြောလိုက်တာက
““ ဟဲဟဲ .....မောင်လည်းမင်းလိုပါပဲကွာ အဲတစ်ပုဒ်ကိုမရဘူး ””
ဒီလိုနဲ့ပဲ ခရီးသွားအဖွဲ့တစ်ခု သူ့ဆိုင်ကိုဝင်လာတယ်…. ခေါင်းဆောင်
ဂိုက်ကလဲ သူနဲ့ခင်နေတော့ အစ်မပြော မကြောက်နဲ့ ဆိုပြီး သင်ပေးတယ်
အဲဒီမှာ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်က ဘီလူးရုပ်ကလေးတစ်ခုကိုမေးလိုက်တယ်…..
How much is it? (ဘယ်လောက်လဲ)
It is 80$. ဒေါ်လာရှစ်ဆယ်ကျပါတယ်ပေါ့… အဲဒီအထိဟုတ်နေတုန်းပဲ…
Oh… very Expensive….
အစ်မကြီးက.. အင်္ဂလိပ်စကားလဲပြောချင် သူ့အရုပ်လေးမရောင်းရမှာကို
မExpensiveဖူးလေ… very cheap တယ်လေ… If you like I လျှော့ပေးမယ်လေ.. တဲ့…
" မေမေမျှင်ရှိလား "
" ရေချိုးနေတယ်၊ ဈေးဝယ်မလို့ဆို ငါရောင်းတတ်ပါတယ် "
" မေမေမျှင်မှသိမှာ "
" ငါလဲ တစ်ဆိုင်လုံးသိပါတယ် ကဲ ပြောဘာဝယ်မလဲ "
" အတွင်းပစ္စည်းဝယ်ချင်လို့ "
အဲသည်အချိန်မှာ ဒေါ်သေးမျှင်ကရေချိုးရာက လှမ်းအော်တယ်။
" ကတွတ်ပီ တော်မသိဘူး၊ လစဉ်သုံးပစ္စည်း၊ အတွင်းပစ္စည်းတို့ဆိုတာ ကျုပ်မှသိတာ "
အရောက်ပို့ ပို့ဆောင်ရေးသည် ကျေးရွာအရောက် ကုန်ပစ္စည်းများ ပေးပို့ပါသည်
ရွာသာယာမှ ဖိုးထောင်တစ်ယောက် ဖက်ရှင် မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင် ဝယ်လာသည်
မိုဒယ်လေးတွေ ဝတ်စုံလှလှလေးတွေနှင့် ကြော်ငြာလေးတွေ တွေ့တော့ အတော်ကြိုက်သွားသည်
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ သာဝနှင့် တိုင်ပင်သည်
ငါတော့ ဒီကက်တလောက်စာအုပ်ထဲက ကောင်မလေးကို ကြိုက်တယ်ကွာ ဈေးလဲ မဆိုးဘူးကွ ငါတစ်ယောက်လောက်မှာမလားလို့
အေးကွ မင်းအရင်မှာလိုက် သူတို့ ဓါတ်ပုံထဲကလိုပဲ လှရင် ငါလဲ မှာမယ်
သူငယ်ချင်း ဖိုးထောင် မင်းမှာထားတဲ့ ကောင်မလေး ရောက်ပြီလားကွ
အေး သူငယ်ချင်း အဝတ်အစားတွေတော့ ရောက်ပီကွ လူကတော့ မကြာခင်ရောက်လာမယ် ထင်တယ်။
အသက်ရွယ်ကြီးရင့် ကာ လင်မယားကတောက်ကဆ ရန်ဖြစ်နေကြစဉ် လင်ဖြစ်သူ
အဖိုးကြီးက မယားဖြစ်သူ အဘွားကြီးအား ရိုက်နှိက်နေလေသည်။
ထိုစဉ် သမီးဖြစ်သူ ငိုယိုပြီး ဖခင်ဖြစ်သူအားတိုင်လေသည် " အဖေ သမီးကို
ဖခင်။ ။ "# # ^ ^ % % သား ဒီကောင် သူများသားသမီးကိုလည်းယူုသေးတယ်
ကိုဒသဂီရိတို့ချစ်စခင်စ ကြင်နာစ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်ကနေ သားသမီးတွေ ပွားစီးလာတဲ့
အချိန်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ ဆိုတာကို
ညားကာစကတော့ မျက်စိအောက်က ပျောက်မသွားနဲ့ဦး တနေ့ကုန်ထိုင်ပြီး
သူနားက တဖ၀ါးမှမခွာလို့ ချစ်တက်လိုက်တာလို့ ထင်ထားတဲ့ မမိန်းမ.....
ကာလတွေ ရွေ့လျားလာတော့ ကလေးတစ်
အခေါ်အဝေါ်လေးကလဲ ပြောင်းလာတယ် ကိုဒသဂီရိက မမိန်းမ ကို ကလေးတစ်ယောက်အမေ
အရင် ကအလုပ်ကိစ္စကလွဲလို့ သူ့အနားမှာပဲ အချိန်ပေးတဲ့ ကိုဒသဂီရိဟာ
ထွက်တက်လာတယ်... သွားခါနီးရင်လဲ ကဲ ကို အပြင်သွားလိုက်ဦးမယ်
မမိန်းမက ပြုံးပြုံးလေး ကြည့်လို့ ကျန်ခဲ့တာပေါ့ ... ကိုဒသဂီရိက KTV ,
တို့ ဘာတို့ သွားပြီ ရေလည်လန်းနေတာပေါ့
အဲဒီလို သွားတာလဲ ခဏခဏပဲလေ သွားတိုင်းလဲ သွားလိုက်ဦးမယ်
ဒီလိုနဲ့ တစ်ယောက်ကနေ နှစ်ယောက် ... နှစ်ယောက်ရလားတော့
သွားလိုက်ဦးမယ် ကလေးနှစ်ယောက်အမေရေ.....ဆိုပြီး လစ်တယ်လေ မမိန်းမက
ပြုံးတာကလဲ ပညာပါလာပြီဗျ .......
ငါးသလဲထိုး ငါးမြွေထိုးပြုံးလေးတွေ ပေါ့ .....
အဲ့ သုံးယောက်မြောက်မွေးတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကလေး လေးလမပြည့်ခင်အထိ
မိန်းမနား ကပ်သေးတယ် ...လေးလလဲ
ပြည့်ရော ထုံးစံအတိုင်း သွားလိုက်ဦးမယ် ကလေးသုံးယောက်အမေရေ.....ဆိုပြီး
လစ်မလို့ ခြေလှမ်းနေတုန်း မမိန်းမ
က ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် နောက်ကိုဒသဂီရိအပြင်ကို
‘‘ သဘာဝ လောကကြီး ကို တည်နေအောင် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ ဓာတ်ကြီး လေပါးကို
‘‘ မင်းလက်ကို သန်ရှင်းအောင် ဘာကိုသုံးရသလဲ။’’
‘‘ ဆပ်ပြာပါ ဆရာ ’’
‘‘ ရောမမြို့ကြီးကို ဘယ်အချိန်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာလဲ။’’
‘‘ ဘာလို့ ညလို့ ပြောရတာလဲ’’
‘‘ ဆရာပဲပြောတယ်လေ။ ’’
‘‘ ရောမမြို့ကြီးကို တစ်နေ့တည်း နှင့် မတည်ဆောက်နိုင်ဘူးလို့’’
‘‘ မိုးချိန်းရင် လျှပ်စီးလျှပ်တာကို အရင်မြင်ရ ပြီး အသံကိုနောက်မှ ကြားရတာ
‘‘ မျက်စိက နားထက်ရှေ့နည်းနည်း ပိုရောက်နေလို့ခင်ဗျ။’’
‘‘ ခရစ်တိုဖာကိုလံဘတ်ရဲ့ နောက်မှာ (၁၄၅၁-၁၅၆၀) ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်။
‘‘ ကိုလံဘတ်ရဲ့ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ပါ ဆရာ။’’
မောင်မောင်က ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး-
‘‘ ကျွန်တော့်သားကိုခွင့်ပေးဖို့ ခွင့်တိုင်တာပါ။’’
‘‘ ခု ဖုန်းဆက်တာဘယ်သူလဲ’’
‘‘ ကျွန်...ကျွန်..ကျွန်တော့် အဖေပါ ဆရာကြီး။’’
၆) မှန်ပေမယ့် မှားတယ်
‘‘ ထိလို့ကိုင်လို့ မရတဲ့အရာ အမည်ပေါ့။’’
‘‘သိပါပြီဆရာ။ မီးဖိုပေါ်က ထမင်းအိုးပါ။’’
‘‘ နာမ် ’’တစ်ခုကိုပြောပါ။
‘‘ နွား ’’ ပါဆရာ။
‘‘ မှန်တယ်၊ ကဲ...နောက်တစ်ယောက်ပြောပါဦး။’’
‘‘ CAT ကတ်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သိရဲ့လား။’’
‘‘ မင်းအိမ်မှာကြွက်တွေကို ဘယ်သူဖမ်းတာလဲ။’’
၉) အမေးနှင့် အမေး
‘‘ မင်းအမြဲ သင်္ဘောစီး ခရီးသွားနေပြီး ခုထိရေမကူးတတ်သေးဘူးလား။’
‘‘ ခင်ဗျားရော အမြဲလေယာဉ်ပျံစီး ခရီးသွားနေပြီး ခုထိ မပျံတတ်သေးဘူးလား။’’
‘‘ မင်းကဘာလို့ ကျောင်းအမြဲ နောက်ကျနေရတာလဲ။’’
‘‘ လမ်းထောင့် ရောက်တိုင်း သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်ကိုတွေ့နေလို့ပါ။ ’’
Here are some sayings from School....
Teacher: 'What is your name?'
Student: 'Mera naam Suraj Prakash hai.'
Teacher: 'When I askaquestion in English, answer it in English.'
Student: 'My name is Sunlight.
Teacher: 'What is your name?'.
Student: 'My name is Beautiful Red Underwear'
Teacher: 'What kind ofaname is this? Don't joke tell me the right name'
Student: 'My name is Sunderlal Chadda."
Student: Gandhiji was born.
Student: Gandhiji was four years old.
Student: Mentally affected teachers harassing students
Teacher: Now children, if I sawaman beatingadonkey and stopped him then what virtue would I be showing?
Student: BROTHERLY LOVE
Teacher: Because of Gandhiji's hard work what do we get on 15th August?
Student: A holiday
Teacher: 'Can anyone give me an example of Coincidence? '
Johnny: 'Sir, my mother and father got married on the same day same time.'
Sunny: As old as I am.
Sunny: He became father only after I was born. (1st Rank)
Teacher: There isafrog, Ship is sinking, potatoes cost Rs3/kg...Then, what is my age?
Student: Well, my sister is 16 yrs old
and she is half mad.
Forward မေးလ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
HAPMALAYSIA CYBER FORUM :: HAPMALAYSIA CYBER FORUM :: GENERAL (CHIT CHAT) :: ဖိုရမ်ထဲရှိသီးသန့်အကြောင်းအရာမရှိသည့်ခေါင်းစဉ်များကိုဒီနေရာလေးမှာ တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ကြပါတယ်